I-HANNOVER MESSE 2019, uHanver, iJamani - i-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
1-5 uEpreli 2019
UHanverver Messe yiyona nto ibalulekileyo kwihlabathi. UHanverver Messe uyaziwa njengomnye wezobugcisa obunobungcali kwiJamani. Ibonakala ngathi iphumelela kwaye isebenzayo kwibala lemidlalo yokukhuphisana kwaye iyabonwa njengendawo efanelekileyo yokufumana ulwazi malunga nezoshishino ziyazi njani. Ngamava angaphezu kweminyaka engama-50, umcimbi kulindeleke ukuba ubekho kwiindwendwe ezingama-210,000. Ababonisi abangama-6150 baya kwii-5 zeentsuku ze-Hannover Messe. Kwiintsika ezihamba phambili zorhwebo zenzeke ngokufanayo, i-HANNOVER MESSE ihlanganisa uluhlu olubanzi lweemxholo kunye nemiboniso kunoma yimuphi umcimbi "RD, i-automation yezoshishino kunye ne-IT, ukubonelela nge-industrial, ubunjineli bemveliso kunye neenkonzo, kunye ne-teknoloji yamandla kunye nokusingqongileyo. Ithuba lokuphuhlisa ukuthengisa olutsha lukhokelela kwamanye amacandelo, ukufikelela okuthe ngqo kwimveliso emitsha kunye nobuchwepheshe kunye neentlanga ezinkulu ezikhangele ukuheha ababonisi kunye neendwendwe ezivela kwihlabathi lonke. Fumana imveliso yezinto ezintsha kunye ne-teknoloji yakutshanje. Nangona ihlabathi lanxibelelwano lwehlabathi, iintsika zezorhwebo zisasebenza njengendawo yentlanganiso ebalulekileyo yabathathi-nxaxheba. Senza amapulatifomu anjalo "kwihlabathi jikelele" ngokusekelwe kwintanethi yethu ebanzi kunye namava, izakhono ezizodwa kunye neenkcukacha ezifanelekileyo zorhwebo.
Zonke iikhompyutheni eziphambili kunye nemimandla ephambili yoshishino - uphando kunye nophuhliso, ukuzenzekela kwezoshishino, i-IT, ukubonelela nge-industrial, ubuchwepheshe bokuvelisa kunye neenkonzo kwiinkcukacha zamandla kunye nokuhamba "kungatholakala eHannover. Zisebenzise zonke iintsebenziswano ezenziwa nguHANNOVER MESSE. Wamkelekile kwi-hotspot yehlabathi jikelele.